Faahfaahinta Dhaawaca Soo Gaaray Lionel Messi Iyo Kulamada Uu Ka Maqnaan Karo Oo La Shaaciyay | Laacib.net
Faahfaahinta Dhaawaca Soo Gaaray Lionel Messi Iyo Kulamada Uu Ka Maqnaan Karo Oo La Shaaciyay
September 25, 2019 Balaleti 1
Lionel Messi ayaa seegi karo kulanka ay Barcelona la ciyaareyso Getafe isbuuca soo socda ka dib kaliya 45 daqiiqo uu garoonka ku jiray kulankiisii ugu horeysay ee uu ku soo bilowdo xilli ciyaareedkan oo ay xalay oo Talaado aheyd ay ka badiyeen Villarreal.
Messi oo la bedelay ka dib dhaawac gumaarka ka soo gaaray
Messi ayaa waxaa bedelay Ousmane Dembele waqtigii nasashada ee kulankii Camp Nou ka dib markii uu ka sheegtay xanuun gumaarka ah, iyadoo tababaraha Barcelona Ernesto Valverde uu yiri ciyaarta ka dib:
“Xanuun ayuu ka dareemayay gumaarka sidaasi darteed ma aanan dooneynin inaan halis gelino.”
Messi ayaa maqnaa isbuucyadii ugu horeysay ee xilli ciyaareedka dhaawac darteed, waxaana uu soo laabtay kulankii isbuucii hore ee Champions League ee ay barbaraha goolal la’aanta la galeen Borussia Dortmund, isagoo kulankaas bedel ku soo galay qeybtii labaad.
32 jirkaan oo ku guuleystay abaalmarinta xiddiga sannadka adduunka ee FIFA ayaa sidoo kale bedel ku soo galay kulankii ay guuldarada ka soo gaartay Granada Sabtidii ee horyaalka La Liga.
Miyuu Messi seegayaa kulanka Getafe?
Waxay u muuqataa in Messi uu ku laabanayo miiska daawada sida ay sheegayaan wararka warbaahinta Catalan iyadoo TV3 ay soo jeedisay in Barcelona ay ka tagi doonto xiddiga reer Argentina kulanka La Liga ee ay Sabtida u safrayaan Getafe si dhaawaciisa uu uusan uga sii darin.
Griezmann, Arthur oo shabaqa u soo taabtay Barcelona
Inkastoo Santi Cazorla uu gool fiican dhaliyay hadana goolal ay kala dhaliyeen Antoine Griezmann iyo Arthur Melo ayaa Barcelona ka caawiyay inay wadada guusha ku soo laabato iyagoo 2-1 kaga badiyay Villarreal.
Hordhaca kulanka adag ee caawa Bernabeu ku dhexmaraya Real Mardird vs Osasuna
One response to “Faahfaahinta Dhaawaca Soo Gaaray Lionel Messi Iyo Kulamada Uu Ka Maqnaan Karo Oo La Shaaciyay”
messi dhaawaca ha la dhinto
8bilood baa rajaynayaa inuu maqnaado